Moments Neshamwari 13
Ko vakafa vanogara mumhuri, mumharaunda, uye kana zvakadaro kune hurumende?
Avo vanosiya hupenyu huno vanozorora hwakareba kana hupfupi, maererano nezvavanoda. Ivo vanobva vaenderera nekuvapo kwavo mumamiriro ekumashure sekugara kwavakaita pasi pano. Asi pane mutsauko uyu, nepo hupenyu hwepasi pano hwaida zvese zvinongedzo zvemurume kuti zvivepo munyika ino, nyika inotevera inongoda mota chete yakakodzera mundege iyo pfungwa, iyo ego, inoshanda.
Kana munhu akararama nemhuri yake kana nharaunda yepasi pano maererano nechishuwo chake, zvichave zvakare chishuwo chake chekuenderera mberi nehupenyu hwakadai munyika yekufa. Kana akasarudza hupenyu hwega, kana hupenyu hwakazvipira kudzidza kana kutsvagira, haazodi hupenyu pakati pevamwe; asi mune izvo zviviri, maererano nechishuwo chake muhupenyu hwepanyama, saka kuchiva kwake kuchaenderera mberi mushure mekufa.
Mushure mekufa, murume, izvo, izvo, pfungwa, anoenderera neese masimba ake, asi kubvisa muviri wepanyama uye chimiro chemuviri wemuviri. Pese paanga achifunga kana kufarira ipapo ndipo panogara murume. Kana, zvakadaro, pfungwa dzakaparadzaniswa nenyika nehuremu kubva mumuviri wayo wemuviri, iyo yekutaura uye kutaurirana neyepanyama nyama yakagurwa uye murume haakwanisi kuve nemiviri yemuviri yemhuri yake kana yenharaunda yaive yakagara mafungiro ake. Kana, zvakadaro, kufunga kwake kwemhuri kana nharaunda kwaive kwakasimba angave achifunga navo kana kuvabata mupfungwa yake sezvo mumwe angave achifunga nevemhuri kana shamwari kana achirarama munyika kunyangwe iye achigara kure nyika. Aisazove nemafungiro matsva, kana kuwana ruzivo nezve mhuri kana nharaunda mushure mekufa kwake, kana kuve nezvavo achiziva zvavachaita, sekufunga kunofungidzirwa dzimwe nguva. Mushure mekufa munhu anorarama mupfungwa dzaaimbova nadzo achiri mupenyu. Iye anofungazve pamusoro pezvaaifunga muhupenyu.
Kune nyika yemafungiro, iri shure kwepasirese nyika inogarwa chaizvo nemurume mukati meiri mumuviri wenyama, nekuti nyika kwaari sezvaanoidudzira mune yake yekufunga nyika. Asi pane imwe nyika iri pakati penyika yekufunga nenyika yepanyama yekudhakwa kana kudhakwa. Iko kushuvira kunenge kuri kwakakurisa chinhu. Meso akadaro angaita zvakanyanya zvakafanana neiya ari pasi pesimba remushonga kana chinwiwa. Zvakangodaro, chishuwo chaizozviratidza pachako kunyange sezvo chidhakwa chinoita kuratidza chishuwo. Chete mukuonekwa mashoma kwemiviri yekudaro iyo pfungwa iripo. Seidzo pfungwa dzinoverengerwa dzehupenyu hwemhuri kana yehupenyu hwenharaunda sechinhu chakanakira mune hwayo hwepanyama, saizvozvi pfungwa imwechete ichabata hupenyu hwemhuri kana yenharaunda mune yakagadzirirwa nyika mune yayo yekufa mamiriro. Asi nepo mune ino nyika ino hupenyu hwakanakisa hwaiita senge hune mumvuri uye husina kusarudzika uye nehupenyu hwepanyama chaihwo uye huchokwadi, izvozvi mamiriro ave kudzoserwa; Nyika yakanakisa ndeyechokwadi uye yenyama yanyangarika zvachose kana kungoita seyakanaka.
Ehe, kune hurumende mune inotevera kufa nyika. Imwe neimwe yenyaya vanoti mushure mekufa ine hurumende yayo uye nemitemo yenyika yega yega inodzora nyika iyoyo. Mutemo wenyika yeshungu unoratidzwa izita rayo: kuchiva. Nyika yakanaka inotongwa nemafungiro. Nyika imwe neimwe inodzorwa zvoga neicho chishuwo, kana fungidziro yakanaka, imwe neimwe maererano nemhando yayo, uye zvese zvinoenderana neruramisiro.
Pane chirango kana mubairo wezviito zvakaitwa nevakafa, kana muhupenyu kana mushure mekufa?
Ehe, uye chiito chimwe nechimwe chinounza chazvo, maererano nechiito uye zvinoenderana nechinangwa uye pfungwa chakakurudzira chiitiko ichi. Vazhinji vanoita munyika ino vanoita nekusaziva, zvakadaro chiito chinounza iwo mubairo kana chirango. Iye anodhonza kwakakonzera pfuti iyo yaasina kuziva kuti yakatakura uye opeta kubva munwe, kana ruoko rweshamwari, anotambura zvawanikwa mumuviri zvakawandisa sekunge akapfura aine chinangwa chekukuvadza. Chirango chemuviri chakafanana. Asi haatamburi nechirango chepfungwa chaizouya nekuzvidemba, chaaizotambura dai anga akaita chiitiko chacho neruzivo rwezvichaitika.
Izvi zvinoshanda kumubvunzo kana uchirarama munyika yemuviri. Asi kune rimwe divi iro riri mushure merufu rufu. Vaya vari mumashure mekufa mamiriro anoita chete semhedzisiro inotevera zvikonzero. Nyika ino ndiyo nyika yezvikonzero pamwe nemhedzisiro, asi nyika dzinotevera dzinongova nemhedzisiro. Muviri wechido unoramba uchiita mushure mekufa zvichienderana nekusimbisa kwakabvumidzwa mukati mehupenyu hwepanyama. Naizvozvo, zviito zvinoitwa neasidhiral organisation, kana kunyange nepfungwa iri mune yayo yakanaka nyika, zvinongoitika chete kwete zvikonzero. Iwo ndiwo mhedzisiro semubhadharo kana chirango chezviito zvinoitwa munyama wepanyama. Asi zviitwa izvi hazvizopiwi mubayiro kana kurangwa.
Mazwi ekuti "mubairo" uye "kurangwa" ndiwo mazwi ehunyanzvi. Ivo vane yavo pachako uye ine udyire zvinoreva. Kunyangwe iri mune ino kana chero imwe nyika, mutemo wechokwadi unodudzira chirango zvinoreva chidzidzo chakapihwa kune uyo anoita zvakaipa. Mubairo chidzidzo chakapihwa kune unoita chiito chakakodzera. Chidzidzo icho chakanzi chirango chinopihwa muiti kuti amudzidzise kusatadza zvakare. Mubayiro unodzidzisa mhedzisiro yechiitiko chakarurama.
Mumamiriro ekufa mushure mekufa, muviri wechido unoshungurudzika zvakafanana nemurume wekunya kwekudya, kana asina nzira kana mukana wekugutsa nzara yake. Muviri wenyama ndiyo yakasarudzika mukati mayo iyo iyo shungu muviri unogutsa kwayo kudya. Kana muviri wechido ukanyimwa kana kugurwa kubva mumuviri wake wenyama parufu, nzara dzemukati dzinoramba dziripo, asi haina nzira yekuzvigutsa. Zvekuti kana zvishuwo zvave zvakanyanya uye nekugutsikana kwemuviri pane mushure mekufa nzara yekuda, kana kupisa kwekuda, asi pasina nzira yekuigutsa kana kuifadza. Asi pfungwa dzakabudirira, dzakawana mufaro wese kuenda kuzadzikiswa kwezvinangwa izvi, nekuti zviri munyika mune izvo zvibodzwa zviripo.
Nekudaro isu mune iyo mushure mekufa inoreva chirango kana mubairo, kana zvakanyanya kudanwa chaizvo, izvo zvidzidzo zvechiitiko chakarurama nechakaipa, semhedzisiro yemifungo, zviito nezviito zvakaitwa paunenge uchirarama munyika yemuviri.
Ko vakafa vanowana zivo here?
Aiwa, ivo havana munzira chaiyo yeiyo nguva. Ruzivo rwese rwunowanikwa nepfungwa runofanirwa kuwanikwa uchirarama mumuviri wenyama mune ino yepanyama. Apa ndipo panofanira kuwana zivo kana ruzivo ruchizowanikwa. Mushure mekufa tinogona kupfuura nepakati pekugaya kana kusimudzira, asi nezvezvinhu zvinowanika munyika ino, mupfungwa imwe chete kuti nzombe inogona kubira beche ichiri mudanga rayo, asi chete neiyo yakatakura pamwe nayo kubva munda. Saka ivo vakafa vanogara pamusoro kana kuchera izvo zvido, pfungwa, kana zvibodzwa, izvo zvavakagadzira, kuvandudza nekushongedzwa munguva yehupenyu. Kuziva chaiko kwenyika dzese kunofanira kuwanikwa uchirarama munyika ino. Iyo sangano haigone kuwana mushure mekufa izvo izvo zvaasina kuziva mukati mehupenyu. Inogona kukudza uye nekurarama zvakare zvekare izvo zvaizivikanwa munguva yehupenyu, asi inogona kuwana hapana ruzivo rutsva mushure mekufa.
Ko vakafa vanoziva zviri kuitika munyika ino here?
Vamwe vanogona, vamwe havagone. Zvinoenderana nezvatinoreva ne “vakafa.” Masosi epasi akasungwa ndiwo chete chikamu chevazhinji 'vevakafa' vanogona kuziva zviri kuitika munyika. Asi ipapo ivo vanogona kuziva chete izvo zviri kuitika sezvo zvichienderana nezvishuvo uye zvishuwo izvo zvavakasangana nazvo muhupenyu, uye zvinoenderera mberi zvine chekuita navo. Semuenzaniso, muviri wechidhakwa chemunhu chidhakwa chaizoziva chete zviri kuitika munyika sezvo zvichienderana nechishuwo chake chekunwa uye kunyangwe ipapo chete paakakwanisa kuwana vavakidzani uye vanhu vakapindwa muropa nekunwa. Aigona kuwana vavakidzani nekwekwe kekuda zvekuda like, asi kuti awone zviri kuitika anofanira kuzviita kuburikidza nemuviri weiye anonwa, izvo aizoita nekupinda nekutarisa uyo anonwa.Asi chishuvo chemuviri wechidhakwa chaisazoziva zvaiitika munyika yezvematongerwo enyika kana zvemabhuku kana hunyanzvi, uye hachizomboziva kana kunzwisisa zvavakawanikwa mune zvekuongorora nyeredzi kana kwesainzi yemasvomhu. Sezvo munhu wega wega achitsvaga nharaunda inowonekera kwazvo mune yepanyama, saka miviri yekuchiva inozokwezvwa nenzvimbo dzemuviri dzakakodzera hunhu hwezvido zvavo.
Mubvunzo ndewokuti, vaigona kuziva zviri kuitika kunyange munzvimbo idzo? Wakajairwa chishuvo muviri haugone, sezvo isina nhengo dzemuviri kuburikidza nazvo kuona zvinhu zvepanyama. Inogona kunzwa chishuwo uye kuve padyo nechinhu chekutaura kwayo, asi yaisakwanisa kuwona chinhu kunze kwekunge yapinda mumuviri wemunhu uye yakashandisa nhengo dzekuona kana imwe pfungwa kuti ibatanidze pamwe nenyika yepanyama. Zvakanyanya kunaka, muviri wenguva dzose wekuchiva unoona vatete venyeredzi chete zvezvishuvo zvepanyika.
Pfungwa dzakange dzoregedza kubatana kwayo nemuviri uye dzikapfuura mune hwayo hwakanakisa nyika yaisaziva zvaiitika munyama wepanyama. Yakanakisa nyika kwairi kudenga kwaro. Denga iri kana rakasarudzika nyika yaizorega kuva yakadaro kana zvese zvinhu zviri munyikadzimu zvaizivikanwa. Pfungwa dzepasi rese dzingave dzinozivikanwa kune dzakapfuura mune yakakodzera nyika, asi chete seizvo zvibodzwa izvi zvakafanana, sekunge zviri kuitika nenjere munyika yayo yakanaka.
Iwe unotsanangura sei mamiriro ezvinhu apo vakafa vakaonekwa kana muchiroto, kana kuvanhu vakanga vakamuka, uye vakataura kuti kufa kwevamwe vanhu, kazhinji dzimwe nhengo dzemhuri, kwaive pedyo?
Kurota izvo zvisiri nekuda kwechikonzero chemuviri chinouya kubva kune nyika ye astral kana kubva munyika yekufunga. Rufu rwemunhu rwakaziviswa muhope zvinongoreva kuti uya akaziviswa kufa akatogadzira kana kuburitsa izvo zvinounza rufu rwake, uye zvinokonzeresa saka zvinoratidzwa munyika yeastral. Ikoko vanogona kuonekwa semufananidzo; mamiriro ese ezvinhu anouya parufu anogona kuonekwawo kana akatsvakwa. Saka zviroto, zverufu rwunoitika, sezvakaziviswa, zvinogona kuonwa nemunhu wese achisangana neazvino kufunga kwepfungwa kwakonzera mufananidzo. Mune iyo pati apo mumwe munhu anoonekwa muchiroto zvinoreva kuti kutaridzika kwakadaro kunopa hanya kweiye muchiroto kurufu rwuri kuuya. Izvi zvingaitwa kungave kuedza kumisa rufu, kana kugadzirira iyo, kana semuenzaniso unozoonekwa nevaya vanonyanya kubata.
Nheyo imwecheteyo yaizobatanidzwa mune iyo pakafa vakafa uye ndokuzivisa kufa kwekuuya kweumwe kune munhu aive akamuka, kunze kwekunge maziso emunhu aizozonzwa nechitarisiko, kana pfungwa yevazivi inokurumidza kuziva iyo chitarisiko. Izvo zvikonzero zvakafanana zvaizoshandiswa. Asi mutsauko ungave uri iyo iyo iyo pfungwa dzinoona muchiroto zvakajeka kupfuura mukumuka kwehupenyu, uye nokudaro chimiro chezvemashiripiti hachifanirwe kunge chiri dense, chirevo chinofanira kuve chakanyanya kutaurwa uye masimba epanyama akaunzwa mukutamba kuti azvizive. Vakafa vakazozviratidza vanga vari muviri wekuchiva uyo wakabatanidzwa kana hukama neimwe nzira neuyo wakaziviswa nezverufu rwake. Asi vanhu vese vakaziviswa kufa havafe vanofa sezvakaziviswa. Izvi zvinoreva (kana munhu wacho asina kunyengedzwa nefungidziro) kuti izvo zvinokonzeresa rufu hazvisati zvaburitswa, asi kuti rufu rwunotevera kunze kwekunge matanho emari asunganidzwa kuti aregedze. Kana chiito chakakodzera chakadaro rufu rwunogona kudziviswa.
Vakafa vakakweverwa kumitezo yei mhuri yavo paiva pasi pano, uye vanovatarisira; vanoti amai vakasiyiwa pamusoro pevana vavo vaduku?
Zvinokwanisika kuti mumwe wemitezo yemhuri yakasiya angakwezvwa neumwe kana vamwe vemhuri kana paine chishuwo chisina kuzadziswa icho chakasimba panguva yehupenyu. Semuenzaniso, mumwe munhu aida kuendesa chimbuzi kune chimwe chaaive anacho munguva yeupenyu nekunyepedzera. Pakangobuditswa dudziro yacho, kana uya anenge aine zita apinda mune chaicho, chishuwo chaizozadzikiswa uye pfungwa dzakasunungurwa kubva pazvisungo zvakazvibata. Panyaya yaamai vakatarisa pamusoro pevana vavo, izvi zvinogoneka chete apo iyo pfungwa yakasimba kwazvo mukati mehupenyu uye nguva dzekufa sekubata pfungwa dzaamai kune mamiriro evana vavo. Asi izvi zvinofanirwa kusunungurwa kuitira kuti amai vasunungurwe uye vana vabvumirwe kuita zvavakange vagadzira muhupenyu hwekare. Mushure mekupfuura munyika yavo chaiyo kana kudenga, amai vabva vachiri kufunga vana vavanoda kwaari. Asi iye akafunga nezvevana haagoni kuvhiringidzika mune yake mamiriro ekunze, kana zvisina kudaro mamiriro haazove akanaka. Kana vana vachitambura haangazvizive iye pasina kutambudzika pachezvake, uye kutambudzika hakuna nzvimbo munyika yakanaka. Kutambudzika kunoumba chikamu chezvidzidzo uye ruzivo hwehupenyu kubva kune izvo pfungwa dzinotambura kudaro dzinowana ruzivo uye kudzidza kudzidza kurarama uye kufunga uye kuita. Chii chinoitika ndechekuti amai, vakabata mukufunga vana vanodiwa kwaari, vanogona kuvakanganisa kuburikidza nemafungiro. Iye haakwanise kutarisa pamusoro pavo mune hutano hwakanaka, asi anogona nepfungwa dzake dzakakwirira kuvasvitsa iwo mavonero apo pfungwa nemararamiro avo anozopindura. Nenzira iyi kwete chete kuti vabereki vevabereki vabatsirwe nevanoenda, ivo vari munyika yakakodzera kana kudenga, asi shamwari dzose dzakaenda dzinogona kubatsira avo vava kurarama munyika ino kana pfungwa dzevakasiya dzaive dzakakwirira uye dzakanaka panguva yavo kusangana uye kushamwaridzana muhupenyu hwepanyama.
Munyika yevakafa pane zuva rimwe chete nemwedzi nenyeredzi sezviri munyika yedu?
Kwete, zvirokwazvo kwete. Zuva nezuva nemwedzi nenyeredzi zvinonzi ndezvemuviri miviri mune zvakasikwa. Saka hazvisizvo, kana kuoneka saizvozvo, mushure mekufa; nekuti kunyangwe kufunga kwavo kunogona kutakurwa mupfungwa mushure mekufa pfungwa inogona kunge isingaite pazvinhu zvacho. Nyadenga uyo aive nemafungiro akange atorwa zvakazara nekudzidza kwake achiri mupenyu, anogona kana afa angori akabatikana nechinyorwa chake, zvakadaro aisazoona mwedzi wenyenyedzi nenyeredzi, asi pfungwa dzake chete kana mazano avo. Zuva nezuva nemwedzi nenyeredzi zvinopa kune zvisikwa zvepasi matatu marudzi echiedza chakasiyana simba nekuwedzera. Chiedza chenyika yedu chairo zuva. Pasina zuva isu tiri murima. Mushure mekufa pfungwa ndidzo dzinovhenekera humwe hwenyika sezvo pamwe huchavhenekera izvo zvepanyama. Asi kana pfungwa kana ego zvasiya muviri wayo wemuviri wenyama uri murima nerufu. Kana pfungwa dzakaparadzaniswa kubva mumuviri wechido, muviri uyu zvakare uri murima uye unofanirawo kufa. Kana iyo pfungwa ichipfuura mune yayo yakanaka mamiriro anovhenekera iyo yakavanzika mifungo uye zvinangwa zvehupenyu. Asi zuva rekunyama, kana mwedzi, kana nyeredzi, hazvigoni kukanda mwenje kumafiro eparufu.
Zvinokwanisika here kuti vakafa vafukidze vapenyu vasina ruzivo rwevapenyu, nekuratidza pfungwa kana mabasa?
Ehe, zvinogoneka uye zvinowanzoitika kuti vanoratidzira masangano ane zvido zvavo zvaive nesimba uye hupenyu hwavo hwaigurwa hwaivepo nekuvapo kwavo kwakapfekedza vanhu vaigona kupara mhosva, kupara mhosva dzavangadai vasina kuita pasina pesvedzero. Izvi hazvireve kuti chiitiko chacho chakazara nekuda kwechinhu chakabvumidzwa, kana kureva kusava nemhosva kweiye akapara mhosva pasi pesimba rakadaro. Izvo zvinongoreva kuti iyo disembodied organisation yaizotsvaga kana kukwezva kune iyo inonyanya kuve inogona kutungamirirwa. Iye anogona kunyanya kufadzwa anofanira kunge ari pasvikiro isina yakakwirira zvibodzwa kana simba retsika, kana mumwewo ayo mafungiro ake akafanana neavo emubatanidzwa wakamufadza. Izvi zvinogoneka uye kazhinji zvinoitwa pasina kuziva kweiye anokurudzirwa kuita. Saizvozvo zvakare zvinogoneka kuti pfungwa, dzive dzemhando yepamusoro, kuti dzipiwe kune vamwe, asi pakadai hazvidikanwi kuenda kune vakafa kune mifungo, nekuti pfungwa dzevapenyu dzine simba rakawanda uye simba kupfuura pfungwa yevakafa.